Amosi 7 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
7 Yenjenje ukundibonisa iNkosi enguMongami uYehova, yaye, khangela! yayila ibubu leenkumbi ekuqaleni kokuphuma koko kwakuhlwayelwe kamva.+ Kwaye, khangela! yayikoko kwakuhlwayelwe kamva emva kokuchetywa kwengca kakumkani. 2 Kwathi lakuba libudle labugqiba utyani bomhlaba, ndathi: “Owu Nkosi enguMongami Yehova, khawuncede uxolele.+ Ngubani na oya kuphakama kwaYakobi? Kuba mncinane!”+ 3 UYehova wazisola ngenxa yoku.+ “Akuyi kwenzeka oko,” watsho uYehova. 4 Yenjenje ukundibonisa iNkosi enguMongami uYehova, yaye, khangela! iNkosi enguMongami uYehova yenza usukuzwano ngokusebenzisa umlilo;+ kwaye wawadla wawagqiba amanzi anzongonzongo, wasidla wasigqiba isiqwenga somhlaba. 5 Ndathi: “Owu Nkosi enguMongami Yehova, khawuncede uyeke.+ Ngubani na oya kuphakama kwaYakobi? Kuba mncinane!”+ 6 UYehova wazisola ngenxa yoku.+ “Nako oko akuyi kwenzeka,” yatsho iNkosi enguMongami uYehova. 7 Wenjenje ukundibonisa, yaye, khangela! uYehova wayemi eludongeni olwenziwe ngelothe yokulinganisa,+ kwaye wayenelothe yokulinganisa esandleni sakhe. 8 Wandula ke wathi uYehova kum: “Ubona ntoni na, Amosi?” Ndathi: “Ilothe yokulinganisa.” Wahlabela mgama uYehova wathi: “Yabona, ndibeka ilothe yokulinganisa phakathi kwabantu bam amaSirayeli.+ Andisayi kuba saxolela ngokubhekele phaya.+ 9 Neendawo eziphakamileyo zikaIsake+ ngokuqinisekileyo ziya kuba zeziphanzileyo, neengcwele+ zikaSirayeli ziya kuphanziswa;+ ndiza kuyivukela indlu kaYerobhoham ngekrele.”+ 10 UAmatsiya umbingeleli waseBheteli+ wathumela kuYerobhoham+ ukumkani wakwaSirayeli, esithi: “UAmosi ukwenzele iyelenqe kanye ngaphakathi endlwini kaSirayeli.+ Ilizwe alikwazi kuwanyamezela onke la mazwi akhe.+ 11 Kuba utsho uAmosi ukuthi, ‘UYerobhoham uya kufa likrele; yena ke uSirayeli, nakanjani na uya kuya ekuthinjweni emke emhlabeni wakhe.’”+ 12 UAmatsiya wathi kuAmosi: “Wena mboni,+ hamba, baleka uye kwilizwe lakwaYuda, udle isonka apho, uprofete khona. 13 Kodwa eBheteli ungabi saprofeta ngokubhekele phaya,+ kuba yingcwele kakumkani leyo+ kwaye yindlu yobukumkani.” 14 Wandula ke waphendula uAmosi wathi kuAmatsiya: “Ndandingengomprofeti, ndingenguye nonyana womprofeti;+ kodwa ndandingumalusi+ nomtheni wamakhiwane emithi yesikamore. 15 UYehova wandithabatha ndilandela umhlambi, yaye uYehova wahlabela mgama wathi kum, ‘Yiya, uprofete kubantu bam amaSirayeli.’+ 16 Ke kaloku live ilizwi likaYehova, ‘Utsho na wena ukuthi: “Uze ungaprofeti ngokunxamnye noSirayeli,+ yaye uze ungaphosi+ nezwi ngokunxamnye nendlu kaIsake”? 17 Ngoko ke utsho uYehova ukuthi: “Yena ke umfazi wakho, uya kuba ngunongogo esixekweni.+ Ke bona oonyana bakho neentombi zakho, baya kuwa likrele. Ke wona umhlaba wakho, uya kwahlulwa ngentsontelo yokulinganisa. Wena ke, uya kufela emhlabeni ongahlambulukanga;+ ke yena uSirayeli, nakanjani na uya kuya ekuthinjweni emke emhlabeni wakhe.”’”+